काङ्ग्रेसले आन्दोलनको नेतृत्व लिने समय आयो : डा. भट्टराई – Kanika Khabar
काङ्ग्रेसले आन्दोलनको नेतृत्व लिने समय आयो : डा. भट्टराई
Kanika Khabar ५ माघ २०७७, सोमबार १३:५२ January 18, 2021 मा प्रकाशित
समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान बचाउनको लागि काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्ने बेला भएको बताएका छन् । ‘संविधानमाथि संकट आयो अब काङ्ग्रेसले आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने समय आएको छ ।’ उनले बताए ।
आज सोमबार गणेशमान सिंह तथा सहिद स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानले राजधानीमा गरेको अन्तक्रियामा डा. भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । उनलेभने, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानको व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट गरिएको छ, यो संविधानमाथिको प्रहार हो, संविधानलाई जोगाउन अब कांग्रेसले नै आन्दोलनको नेतृत्व लिने समय आयो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका सबै अंगलाई धम्क्याइरहेको भन्दै भट्टराईले अदालतसमेत परीक्षाको घडीमा रहेको बताए ।